စက်တင်ဘာလအသံ | နည်းပြ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအစည်းအရုံး
စက်တင်ဘာလ 26, 2018 အောက်တိုဘာလ 22, 2019
Pepe del Rio, ပိတ်ပင်နိုင်ငံတော်သမ္မတက
အသံ™၏ဤစာစောင်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်ပုဒ်အသိအမြင်သည်နှင့်ဒါငါသည်သင်တို့ကိုထူးခြားတဲ့နှင့်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုအဖြစ်နည်းပြအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသင်း (နေကြသောအဖွဲ့အစည်းများ) လက်မှတ်ဖြစ်စဉ်ကိုသတိပြုမိဖြစ်လာမှဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
သောမတ်စ် Leonard ၏ရူပါရုံမဟုတ်ဘဲ၏စာရွက်စာတမ်းများထက်နည်းပြများ၏သရုပ်ပြအလေးပေးသောပိတ်ပင်နှင့်အတူလက်မှတ်များ၏ဖြစ်စဉ်ကိုချောမွေ့ဖို့ဖြစ်တယ်။
သငျသညျလက်မှတ်များ၏ပိတ်ပင်လမ်းကြောင်းမှတဆင့်သွားကြဖို့အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်မယ့်အထူးသဖြင့်ကျောင်းတက်ရန်မလိုပါ။ သင်သည်အဘယ်သို့ပြုပါဖို့လို, သင်နည်းပြဖြစ်စဉ်ကိုနားလည်ကြောင်းသရုပ်ပြအဆိုပါပိတ်ပင်နည်းပြMasteries®သင်စိန်ခေါ်မှုတက်သည်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးထူးခြားကြီးထွားလာသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံကတစ်ကမ္ဘာလုံးတန်ဖိုးထားရပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါပိတ်ပင်လက်မှတ်ကိုအခြားလုပ်ငန်းစဉ်များထက်ပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်နဲ့တူသငျသညျ, ဒီအသံလိမ့်မည်။ အဆိုပါ Certified ဟုပြောအဖြစ်ကြောင့်ဒါဟာမရှိနည်းလမ်းဖြင့်မှန်သည် "ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝနည်းပြကြှမျးကနည်းပြကျွမ်းကျင်မှုသရုပ်ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ "
တစ်ခုပိတ်ပင်လက်မှတ်ရနည်းပြဖြစ်လာသည့်အကြောင်းရင်းမာသ Pasternack အဖြစ်, ထူးခြားတဲ့နှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖြစ်ပါသည်, MMC ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိပိတ်ပင်-bog အတွင်းရေးမှူး "ဒါဟာ သာ. ကောင်းသောအဘို့ကိုအခြားသူများအစေခံရန်အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ " ဟုဆို
လက်ရှိတွင်အဆိုပါပိတ်ပင်နည်းပြလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးလျှောက်ထားသူကိုနည်းပြ၏ခန့်သာ 25% ကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြတ်သန်းရတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးပိတ်ပင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်, သင် tools တွေကို access လုပ်နိုင်ဘယ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်, သင်သည်သင်၏သင်ယူမှုလမ်းကြောင်းပေါ်တွင်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထောက်ခံမှုဖြင့်သင်တို့ကိုပေးလိမ့်မည်ဟု triads နည်းပြအလုပ်ကို။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်ဤဟာယယဇ်ပူဇော်၏အားသာချက်ကိုယူပြီးအားဖြင့်, သင်အာရုံစိုက်နိုင်ပြီး, ထိုသို့သွားပါ။
နည်းပြတစ်ဦးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစံရှိပါတယ်, အဲဒီနောက်ပိတ်ပင်စံရှိသေး၏။ နည်းပြအောင်လက်မှတ်များနိုင်ငံတကာအစည်းအရုံးသင်သည်တစ်လောကလုံးထူးချွန်၏အမြင့်ဆုံးစံနှုန်းတွေနဲ့အရည်အချင်းပြည့်မီဖြစ်ကြောင်းသငျသညျအာမခံထား။ အမှန်မှာ "တစ်လောကလုံးထူးချွန်၏ပလက်တီနမ်နည်းပြစံ။ "
, နောက်ထပ်ပိတ်ပင်ရထားနှင့်ထောက်ပံ့ငွေအရည်အချင်းပြည့်မီနည်းပြအစီအစဉ်များကိုသင်ပိတ်ပင်နည်းပြMasteries®သင်ပေးဖို့လိုင်စင်သငျသညျကိုထောကျပံ့ရန်။ သူတို့ကပိတ်ပင်လက်မှတ်လမ်းကြောင်းကိုအဘို့အသငျသညျပွငျဆငျခွငျးပါလိမ့်မယ်။
ပဲမဆိုကျောင်းကသူတို့ပိတ်ပင်ကိုယ်စားအတည်ပြုနိုင်မသင်ပြောပြ, သို့မဟုတ်သင်ပိတ်ပင်လက်မှတ်အဘို့အသွားမီသူတို့နှင့်အတူအသိအမှတ်ပြုခံရဖို့ရှိသည်နိုင်ပါတယ်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုပါ။ သငျသညျလက်ရှိလိုင်စင်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းစစ်ဆေးလိုပါကကြှနျုပျတို့၏ website ကိုသွားကျေးဇူးပြုပြီး: www.certifiedcoach.org, သငျလက်ရှိလုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူနှင့်အတူဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပါ။
IAC နည်းပြများသည် Certified Masteries Coach သို့မဟုတ် MMC mastery အဆင့်တွင်အသိအမှတ်ပြုခံရသည့်အတွက်ဂုဏ်ယူမိပါသည်။ ဒါဟာဖြစ်စဉ်တစ်ခုထက်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသိအမှတ်ပြုပြီးသည်နှင့်သင်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်အခွင့်အရေးများစွာရှိသည်။
ငါသည်လည်းသင်ပိတ်ပင်နည်းပြMasteries®နှင့်အတူနက်ရှိုင်းစွာအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာမှဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ နှင့်ကျင့်ဝတ်များ Code ကို။ ပိတ်ပင် certified ရရှိထားပြီးနည်းပြသူတို့ကိုယ်သူတို့မခေါ်သောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အထက်တန်းလွှာနည်းပြတစ်ဦးဖြစ်လာသည်။
Pepe del Rio, နေကြသောအဖွဲ့အစည်းများကသမ္မတ
José Manuel "Pepe" del Rio: အလုပ်အမှုဆောင်များနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနည်းပြ။ သူကကမ္ဘာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများကနေ clients များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်သည်။ တည်ထောင်သူနှင့် 22 နှစ်ပေါင်းဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပေါ်အမှုဆောင်အရာရှိနှင့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်လူဦးမိမိကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးဗားရှင်းဖြစ်လာဖို့အထောက်အပံ့ပေးကြောင်းခေါင်းဆောင်မှုနှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ယဉ်ကျေးမှုကိုထားပြီးဖြစ်သောနည်းပြများနှင့် Logotherapy အတွက်အထူးပြုသည့်ရီယိုလေ့ကျင့်ရေး Boutique ကုမ္ပဏီ၏ဦးခေါင်းနည်းပြ ။
self-ပွားက Key ဖြစ်ပါသည်
Krishna ဟိန္ဒူ Kumar ကများက | ပိတ်ပင်အတိတ်မှနိုင်ငံတော်သမ္မတ 2016 / 2017
"ကိုယ်ပိုင်အသိအမြင်တစ်ချန်ပီယံဖြစ်ခြင်းဖို့အဓိကသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်" ဟုဒဏ္ဍာရီအမေရိကန်တင်းနစ်ချန်ပီယံ, Billy ဂျင်းဘုရင်ကဆိုပါတယ်နှင့်အခြားကစားသမားအနေဖြင့်ရော်ဂျာဖက်ဒရေးရှင်း, Usain Bolt ကများနှင့်မိုက်ကယ်ဂျော်ဒန်တူသောအားကစားအတွက်ချန်ပီယံခွဲခြားကြောင်းကိုကွဲပြားအရည်အသွေးကိုဖြစ်ပါတယ်။ ကညီတူညီမျှထိုကဲ့သို့သောပြဇာတ်ရုံ, ဂီတသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဘယ်မှာစွမ်းဆောင်ရည်ကိစ္စရပ်များ၏ကမ္ဘာအဖြစ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအပေါငျးတို့သညျအခွား Arena, အတွက်လိုအပ်ရီနာကှငျးဖိအားအောက်မှာအထွတ်အထိပ်စွမ်းဆောင်ရည်အောင်မြင်ရန်နိုင်စွမ်းအားကစားအတွက် starkly မြင်နိုင်သည်နေစဉ်။ ဒါကြောင့်ဆိတ်ကွယ်ရာကြွင်းသောအရာကနေချန်ပီယံဖြစ်သတ်မှတ်ကြောင်းကိုကွဲပြားအရည်အသွေးလျှင်ဘယ်လောက်သူတို့က Self-အသိပညာ၏အထွတ်အထိပ်အဆင့်ဆင့်အောင်မြင်ရန်သလဲ?
အသိအမြင်မျိုးစုံအဆင့်ဆင့်မှာလက်ရှိဖြစ်လူသိများသည်။ အပြည့်အဝသတိပြုဖြစ်ခြင်းဖို့တစ်ခုတည်းအကြီးမားဆုံးအတားအဆီး၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖြစ်ပါတယ် '' အာရုံပြံ့လှငျ့။ ' အာရုံပြံ့လှငျ့နှငျ့ဆကျဆံရာတှငျဖျော်ဖြေသူအံ့သြဖွယ်ရလာဒ်များအောင်မြင်ရန်ခွင့်ပြုသာမန်နဲ့အထွတ်အထိပ်စွမ်းဆောင်ရည်အကြားအဓိက differential ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ပုံမှန်နေ့ကတဆင့်ရွှေ့အဖြစ်အသိအမြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်ဆင့်ဟာကျနော်တို့ကြုံတွေ့ရကြောင်းအာရုံပြံ့လှငျ့နှင့်မည်သို့ကောင်းစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြင့်ထိုအအာရုံပြံ့လှငျ့ကျော်လွှားဖို့စပ်လျဉ်းခြားနားသည်။ ဘောလုံးကိုသငျသညျဆငျးရဲကိုပစ်ခတ်ကစားဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြအံ့သောငှါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံဖန်တီးသင်သည် 'ဘောလုံးကိုလက်လွတ်မသငျ့သညျ' 'ဟုထငျမှ စတင်. အားဖြင့်အလွန်လျှင်မြန်စွာသငျသညျမှာအပျံသောအခါတင်းနစ်ကစားနေစဉ်, သရုပျဖျောရန်။ အစား အကယ်. သင်ဆီသို့ဦးတည်ရွေ့လျားပါသည်အတိုင်း, သင်ဘောလုံးကို၏ညှနျကွား, ထောင့်နှင့်အလှည့်ဖျားပေါ်တွင်သင်၏အာရုံစိုကျ, ပြန်ရိုက်ချက်သင့်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုအကောင်းဆုံးမှကစားပါလိမ့်မယ်။
ဒီရိုးရှင်းတဲ့ပုံဥပမာကနေ Self-သတိထားဖြစ်လာမှခရီးအာရုံနှင့်လုပ်ရပ်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြင်ကမ္ဘာကြီးထက်ကျော်လွန် သွား. , ကျနော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်အနည်းငယ်သာသိကျွမ်းရာအကြောင်းကိုအတှေးနဲ့ခံစားခကျြကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းကမ္ဘာနှင့်နက်ရှိုင်းစွာချိတ်ဆက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုအပ်သည်ရှင်းပါတယ်။ ဒီခရီးလမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဏ်၏အရင်းအမြစ်ရောက်ရှိဖို့နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အတွင်းစိတ်ဘဝကိုသိရန်ရရှိရန်ကြိုးစား။ အဆိုပါဆူဖီများ၏, Rumi, ချက်ဤ quest ကိုဖော်ပြထားတယ်,
အဆိုပါ sunbeams ပုံနှိပ်ခံယူ!
နည်းပြသူတို့ကို Self-အသိအမြင်သူတို့ရဲ့အတွင်းစိတ် core ကိုကျွမ်းကျင်နှင့်သူတို့၏ရွေးချယ်မှု၏လယ်ပြင်တွင်အထွတ်အထိပ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုဖန်တီးကူညီခြင်းဖြင့်ချန်ပီယံလိဂ်စေ။ နည်းပြအတွက် Self-အသိအမြင်လျှောက်ထားရန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရှာပုံတော်မှာတော့ကျွန်မရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အတော်များများအောင်မြင်မှုနှင့်အတူအသုံးပြုနေသည်ထားတဲ့ AWARETM လို့ခေါ်တဲ့မော်ဒယ်, တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါမော်ဒယ် Self-အသိအမြင်၏ပြီးပြည့်စုံသောပြည်နယ်မှကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သောငါးသဘောတရားများ, အမည်ရနိုးထ (က), Will Power က (W), Action (က), Reflection (E) နှင့်ဆွဲဆောင်ပါ (E) နဲ့ရောက်ပြီး။
ဒါဟာနည်းပြအတွက် Self-အသိအမြင်နှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံများသိရန်အံ့သြစရာပါလိမ့်မယ်ငါသည်လည်းသင်တို့၏အချိန်ငါနှင့်အတူပါချိတ်ဆက်ဖို့မျှော်လင့် krishnakumar@certifiedcoach.org.
Krishna ဟိန္ဒူ Kumar က, ပိတ်ပင်အတိတ်မှနိုင်ငံတော်သမ္မတ 2016-2017
Krishna ဟိန္ဒူ Kumar က အဆိုပါတည်ထောင်သူ-ဒါရိုက်တာအလုပ်အမှုဆောင်နည်းပြ၏ Intrad ကျောင်း (ISEC) နှင့်အိန္ဒိယအတွက်ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်အလုပ်အမှုဆောင်နည်းပြများ၏နယ်ပယ်အတွက်ရှေ့ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ နည်းပြသင်ယူဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်သူ၏အခိုငျအမာယုံကြည်ချက်, အကြီးတန်းကော်ပိုရိတ်အမှုဆောင်အရာရှိ၏ဦးထုပ် donning ပါဝင်သည်ကြောင့်ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်တစ်ဦးမတူညီကြသင်ယူမှုခရီးမှတဆင့်တစ်ဦးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်တင်းနစ်နည်းပြ, B-ကျောင်းကပါမောက္ခ, ခေါင်းဆောင်မှုအကြံပေးသူ့ကိုသယ်ဆောင်ခဲ့ပြီး မဟာဗျူဟာနည်းပြ။ အဆိုပါခရီးဆက်ပြီး ...
ကျွန်ုပ်တို့၏ 2018 Quo Vadis: မှတ်ချက်ဖို့အရေးကြီး? webinars အဆိုပါကျင်းပလိမ့်မည်
နိုဝင်ဘာလအတွက်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က။ ကြှမျးကနည်းပြနှင့်အတူပါဝင်များနှင့် ပို. ပင်ဖြစ်လာအပေါ် Plan ကို